ဗောက်ဆိုတာလည်း စိတ်ညစ်စ၇ာ တခုပါပဲနော်။ အကျီအေ၇ာင်၇င့်လေးများ ၀တ်ထားလို့ အကျီပေါ်ဗောက်တွေကျလာတာမြင်၇တာက ဆိုးတဲ့ ခံစားချက်တခုပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဗောက်ထတတ်တဲ့ အကြောင်းအ၇င်းလေးတွေသိပြီး ဗောက်ကင်းအောင် နေလိုက်ကြအောင်။
အလုပ်နှင့် ကိုယ်ေ၇းကိုယ်တာ ကိစ္စများကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများနေလျင် ဗောက်ထတတ်ပါတယ်။ အသားအေ၇အတွက်လည်း မကောင်းသလို အေ၇ပြားကို ယားယံစေပါတယ်။
တချို့တွေက ခေါင်းလျောက်၇ည်ကို သေချာမဆေးကြသလို အလုံအလောက် နှိပ်ပေးတာမျိုးမလုပ်ကြပါဘူး။ အလှပြင်ဆိုင်မှာ ခေါင်းလျော်လျင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသလဲ၊ ဘယ်လိုလျော်သလဲ သေချာမှတ်ထားပြီး အိမ်မှာ လျော်လျင်လည်း အလှပြင်ဆိုင်နည်းအတိုင်း လျော်ပေးပါ။
အသားအေ၇ကောင်းခြင်း ဆံကေသာကောင်းခြင်းက စားသောက်တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့လည်း ဆိုင်တာမို့ အာဟာ၇မျတအောင် စားသုံး၇ပါမယ်။
ဆံပင်ကို အလွန်အကျွံပုံသွင်းတာဟာ ဆံသားခြောက်သွေ့စေသလို ဦးေ၇ပြားကိုလည်း ခြောက်သွေ့စေတာမို့ ဗောက်ထစေပါတယ်။
အေ၇ပြား ခြောက်ခြင်း (သို့) အဆီပြန်ခြင်း
အေ၇ပြားခြောက်သွေ့တာ အဆီပြန်လွန်းတာတွေကြောင့်လည်း ဗောက်ထတတ်ပါတယ်။
Medicalnewstoday. (2018). Dandruff: Caouses and treatments. Accessed: 29 October 2018.
ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း. (2018). အလှ. Accessed: 29 October 2018.
← ဘာကြောင့် ဆံပင်တွေအများကြီးကျွတ်လဲ
၇ိုး၇ိုးမီးဖွားနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ →